ခင်ပွန်းဖြစ်သူ နှလုံးပြဖို့အတွက် ဆရာဝန် ထိုင်စောင့် ရတာကြာလို့ သားလေးကို ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်အောင် ကြိုးစားခိုင်းလိုက်တဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် – Cele Posts
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ နှလုံးပြဖို့အတွက် ဆရာဝန် ထိုင်စောင့် ရတာကြာလို့ သားလေးကို ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်အောင် ကြိုးစားခိုင်းလိုက်တဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်
အကယ်ဒမီဆု တွေလည်း ရရှိထား သလို အဆိုပိုင်း မှာလည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်ကတော့ တစ်ခေတ် တစ်ခါကတည်း က အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်က ယနေ့ခေတ်ထိ တိုင်အောင် အောင်မြင်မှု တွေကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင် ဆဲဖြစ်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေလည်း လုပ်ကိုင်လျက် ရှိပါတယ်နော်။ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်ရဲ့သီချင်းတွေကလည်း အရမ်းနားထောင် လို့ကောင်းပြီး ရင်ထဲကို တိုက်ရိုက်ထိမှန်လို့ အခုချိန်ထိလည်း မရိုးသွား သေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်က အရင်ခေတ် တုန်းက ဆိုရင်လည်း ဘယ် မင်းသမီးနဲ့မှ မတူတဲ့ ဆံပင်ဒီဇိုင်း၊ဝတ်ပုံစားပုံတို့က အရမ်းကို ခေတ်ရှေ့ပြေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်ရဲ့မေးစေ့က မှဲ့လေးကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အရမ်းသဘောကျကြပြီး ပြီးပြည့်စုံအောင်လှတဲ့အလှပိုင်ရှင်လေးလို့ ချီးကျူးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်ကတော့ ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ စိတ်ချမ်းသာပြီး နုငယ်ပျိုမျစ်မှုတွေက နည်းနည်းလေးမှမလျော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားလေးကလည်း ဉာဏ်ရည် မြင့်မားပြီး ဘက်စုံထူးချွန်တဲ့ ကလေးဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ မေမေထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် က”သား ရေ …ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလားကွယ် ဆရာဝန် တွေ့ဖို့ မေမေ ထိုင်စောင့်တာ ပရိတ်ကြီး၁၁ သုတ်၊ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော် နဲ့ ဓမ္မစကြာ တို့ကို (၅)ခေါက်စီရွတ်လို့ပြီးသွားတယ်လေ .( ကိုအောင်မင်းထွန်း နှလုံး follow up လုပ် တာပါ )”ဆိုပြီး သားလေးကို ဆရာဝန်လုပ်ဖို့ အတွက် တိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။
ခငျပှနျးဖွဈသူ နှလုံးပွဖို့အတှကျ ဆရာဝနျ ထိုငျစောငျ့ ရတာကွာလို့ သားလေးကို ဆရာဝနျကွီးဖွဈအောငျ ကွိုးစားခိုငျးလိုကျတဲ့ ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျ
အကယျဒမီဆု တှလေညျး ရရှိထား သလို အဆိုပိုငျး မှာလညျး ကြှမျးကငျြတဲ့ ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျကတော့ တဈခတျေ တဈခါကတညျး က အောငျမွငျခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျ တဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျက ယနခေ့တျေထိ တိုငျအောငျ အောငျမွငျမှု တှကေို ထိနျးသိမျးထားနိုငျ ဆဲဖွဈပွီး အနုပညာအလုပျတှလေညျး လုပျကိုငျလကျြ ရှိပါတယျနျော။ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျရဲ့သီခငျြးတှကေလညျး အရမျးနားထောငျ လို့ကောငျးပွီး ရငျထဲကို တိုကျရိုကျထိမှနျလို့ အခုခြိနျထိလညျး မရိုးသှား သေးတာဖွဈပါတယျ။
ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျက အရငျခတျေ တုနျးက ဆိုရငျလညျး ဘယျ မငျးသမီးနဲ့မှ မတူတဲ့ ဆံပငျဒီဇိုငျး၊ဝတျပုံစားပုံတို့က အရမျးကို ခတျေရှပွေ့ေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျရဲ့မေးစကေ့ မှဲ့လေးကိုလညျး ပရိသတျတှကေ အရမျးသဘောကကြွပွီး ပွီးပွညျ့စုံအောငျလှတဲ့အလှပိုငျရှငျလေးလို့ ခြီးကြူးကွတာ ဖွဈပါတယျ။ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျကတော့ ပြျောရှငျစရာ မိသားစုလေးကို ပိုငျဆိုငျထားလို့ စိတျခမျြးသာပွီး နုငယျပြိုမဈြမှုတှကေ နညျးနညျးလေးမှမလြော့သှားတာဖွဈပါတယျနျော။
ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျရဲ့ တဈဦးတညျးသော သားလေးကလညျး ဉာဏျရညျ မွငျ့မားပွီး ဘကျစုံထူးခြှနျတဲ့ ကလေးဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျတော့ မမေထှေနျးအိန်ဒွာဗိုလျ က”သား ရေ …ဆရာဝနျကွီးဖွဈအောငျကွိုးစားပါလားကှယျ ဆရာဝနျ တှဖေို့ မမေေ ထိုငျစောငျ့တာ ပရိတျကွီး၁၁ သုတျ၊ပဋ်ဌာနျးပါဠိတျော နဲ့ ဓမ်မစကွာ တို့ကို (၅)ခေါကျစီရှတျလို့ပွီးသှားတယျလေ .( ကိုအောငျမငျးထှနျး နှလုံး follow up လုပျ တာပါ )”ဆိုပွီး သားလေးကို ဆရာဝနျလုပျဖို့ အတှကျ တိုကျတှနျးလိုကျတာဖွဈပါတယျနျော။
အနှစ်(၂၀)က အမှတ်တရတွေကို ပြန်လည်ပြောပြရင်း သတိရအောက်မေ့နေကြတဲ့ မအေးသောင်းနဲ့စိုင်းစိုင်း
ည (၁၂) နာရီတိတိမှာ မွေးနေ့ပွဲလေး ကျင်းပပြီး တန်ဖိုးကြီး လက်ဆောင်တွေပေးခဲ့ကြတဲ့ မိသားစုဝင်တွေကြောင့် အံ့သြောဝမ်းသာနေတဲ့ စံထိပ်ထားဦး
ဒီနေ့မှာပဲ ဘ၀တပါးကို ကူးပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့...
ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရလို့ ရုပ်ဖျက်ပြီး ရှောင်ပြေးရပုံကို...
သန်လျင်သဘာဝတရားရိပ်သာ အကျော်မှာရှိတဲ့ သူမပိုင်ဆိုင်တဲ့...
ပရဟိတအသင်းတွေအတွက် နေ့လည်စာ ထမင်းဘူးတွေကို လှူဒါန်းပေးပြီး ကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
ဒီကနေ့မှာပဲ ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ဘ၀တစ်ပါးကို ကူးပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် ရွှေရည်သိန်းတန်ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုနေလ
ဒီနေ့မှာပဲ ဘ၀တပါးကို ကူးပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်ဗီဗာဟိန်းရဲ့ဖခင်ကြီး နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်ဗိုဟိန်း
ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရလို့ ရုပ်ဖျက်ပြီး ရှောင်ပြေးရပုံကို ပရိသတ်တွေသိအောင်ပြောပြလာတဲ့ အလင်းရောင်